वीपीका डाक्टरलाई दुव्र्यहार गर्ने रायमाझी विरुद्ध ७ घन्टापछि प्रहरीले लियो जाहेरी - Action Khabar - Nepali Online News Portal
वीपीका डाक्टरलाई दुव्र्यहार गर्ने रायमाझी विरुद्ध ७ घन्टापछि प्रहरीले लियो जाहेरी
काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लेखा अधिकृत कमल रायमाझीले कार्डियोलोजी विभागमा डिएम दोश्रो वर्षमा अध्ययनरत डाक्टरलाई गरेको गाली गलौजको जाहेरी प्रहरीले लिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले ७ घन्टापछि पिडित डाक्टरको जाहेरी दर्ता गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका जुनियर रेजिडेन्ट डाक्टरहरु नै इलाका प्रहरी कार्यालयमा गएर जाहेरी दर्ता गराउन खोज्दा शुरुमा प्रहरीले जाहेरी लिन आनाकानी गरेको थियो । पछि चिकित्सकहरुले दवाव दिएपछि मात्रै प्रहरीले करिब ७ घण्टा पछि जाहेरी दर्ता गरेको जुनियर रेजिडेन्ट सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष बिष्णु पोखरेलले बताए ।
आईतबार राती आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख कमल रायमाझीले मदिरा सेवन गरेर कार्डियोलोजी विभाग डिएम दोश्रो वर्षमा अध्ययनरत डाक्टर बिप्लव कार्कीको आवासमै गएर गालीगलौज र धम्की दिएको तथा आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप छ ।
पीडित भनिएका डाक्टर विप्लव कार्की सहित चिकित्सकहरुको एक टोली घटनाको जाहेरी सहित बिहान १० बजे नै इलाका प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । तर, प्रहरीले जाहेरी तत्कालै दर्ता गरेको थिएन । लेखा अधिकृत रायमाझीले डा. कार्कीको आवासमा गएरै अपशब्द बोल्दै गाली गलौज गरेको र हातपातको प्रयास पनि गरेको भन्दै जुनियर रेजिडेन्टहरुले आन्दोलनको घोषणासमेत गरेका छन् ।
उनीहरुले डाक्टरलाई गालीगलौज र धम्की दिने रायमाझीलाई प्रतिष्ठानको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने भन्दै कानुनी कारबाहीको पनि माग गरेका छन् । त्यस्तै आज सोमबार बाटै कोभिड अस्पताल र इमरजेन्सी सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवा बहिष्कारको घोषणा समेत गरेको निवर्तमान अध्यक्ष बिष्णु पोखरेलले बताए ।
प्रतिष्ठानमा कमल रायमाझी विवादित व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । केही वर्षअघि उनले प्रतिष्ठानमै काम गर्ने एक महिला डाक्टरलाई आवास उपलब्ध गराईदिने भन्दै यौन प्रस्ताव राखेको आरोप थियो । आफुसँग यौन प्रस्ताव राखे आवास मात्र हैन प्रतिष्ठानमा स्थायी जागिर समेत दिलाउने भन्दै उनले ती महिला डाक्टरलाई म्यासेजहरु पठाएको सार्वजनिक भएको थियो ।
पछि ती महिला डाक्टरले रायमाझीका विरुद्ध सप्रमाण उपकुलपति कार्यालयमा उजुरी दिएपनि प्रतिष्ठानले कुनै कारवाही गरेन । अहिले लेखा अधिकृत रायमाझीले आफ्नो परिवारलाई थप क्वाटरको आवश्यक्ता भएको भन्दै डा. कार्की बसेको आवास खाली गराउन लगाएका थिए ।
प्रतिष्ठानको सामान्य प्रशासन शाखा मार्फत रायमाझीले डा. कार्की बसेको आवास एफ २.२ युनिट खाली गराउन दवाव दिइरहेका थिए । तर, प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा दिनरात खट्दै आएका डा. कार्कीले परीक्षा पनि नजिक आइरहेको र अर्को आवास समेत नपाएकोले बसेको आवास छोड्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
यसअघि प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले मादक पदार्थ खाएर वार्तामा बसेको विषयले प्रतिष्ठानमा उग्ररुप लिएको थियो । उपकुलपति कै शैक्षिक योग्यता तथा प्रतिष्ठानका विक्रिति विसंगति विरुद्ध आन्दोलनरत चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले ३४ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।
- ४ श्रावण २०७८, सोमबार १७:४६ मा प्रकाशित